दुर्गेश थापा मात्रै ‘आँखाको तारो’ किन ? – Mero Film
दुर्गेश थापा मात्रै ‘आँखाको तारो’ किन ?
‘मादकपदार्थ उत्पादन गर्ने ] उद्योग खोल्न पाउने, खान पाउने, कर उठाउन पाउने, बिज्ञापन पनि मिलाएर गर्न पाउने तर गीत गाउन चै किन नपाउने?’ दुर्गेशको चिसो बियर ह्याप्पी तिहारको बिषयमा समाचार देख्ना साथ मेरो मनमा प्रश्न उठेको थियो । तर त्यो समय सम्म मैले गीत भने सुनेको, हेरेको थिइन । गीत हेरे त्यहा तिहारको गीत नभएर एक बियर कम्पनिको बिज्ञापन पो देखे । मिलाएर जे पनि गर्न पाइन्छ हाम्रोमा । किनकी रेडियो टेलिभिजनमा नबजाउने हो भने यस्तो गीत मज्जाले बनाउन पाइन्छ । किनकी टुबर्ग गल्फ टुर्नामेन्ट, रुस्लान म्युजिक, सिग्नेचर साँझ सब चलेकै छन् । आखिर पछाडी रक्सि बियर नलेखे भैगयो । हामी नेपाली कानुन तोडमोड गर्न माहिर नै छौ । प्रहरी संगको निकटता हामीले अपराध गरेर उम्किन बनाउछौ भने आफ्नो कम्पनिमा कानुनी सल्लाहकार कानुनी परामर्शको लागि नभएर कसरी कानुनको दुरुपयोग गरि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नको लागि गर्छौ ।
अग्रज भनिएका कुमार बस्नेतको रौसीखान जाम चर्चित छ । उनी माथि कुनै आरोप पनि छैन । अलिमियाँ झलकमान गन्धर्व देखि कुमार बस्नेत सम्म सबैले तीनपानेको प्रचार गरेकै हुन् । अहिले नयाँ आएका लोक गीत भनिने गीतहरुको शब्दको त के चर्चा गर्नु दुनियाले सुनेको नै हो । साचो अर्थमा भन्दा लोक दोहोरी साचो सोझो कुरा मात्रै गर्ने हो भने खासै रमाइलो पनि हुदैन । दालमा टड्का झैँ गीतमा घुमाएर द्विअर्थी बिषय मिसौनाले दर्शक स्रोतले मजा लिन्छन पनि ।
दुर्गेशको गल्ति खोज्दै जादा उसले गाजा खानु पर्छ भनेको रैछ । अहिले सम्म देखिएको उसको गल्ति यहि नै रहेछ । तर सन् २०१७मा नै नवाज अन्सारीले गाँजा लाग्यो बोलको गीत सार्वजनिक गरेको रहेछन । तर सायद प्रहरीलाई लाग्यो होला यता गाँजा लाग्यो भन्यो उता गाँजा खायो । आखिर जे पनि त चल्छ । यही मेमा पनि चिरांग खड्का ५ ५५ले समाधि बोलको गीत सार्वजनिक गरे । त्यसमा पनि गाँजाको कुरा छ । यो हेर्दै गर्दा लाग्यो गीतमा भएको शब्द भन्दा पनि दुर्गेशको चर्चा चै गलत भएको रहेछ । यसो भन्दै गर्दा दुर्गेश सहि भन्न खोजेको होइन । संस्कृतिको नाममा व्यवसाय गरेको भान भने गीत हेर्दा हुन्छ ।
अब हिजो देखि आज सम्म दुर्गेशको जीवन हेरौ, हिरो बन्न आएको केटो गायक बनेको छ । उसको रेस्टुरेन्टमा नाचेको, गएको कथा म्युजिक भिडियो निर्देशकले गरेको व्यवहार सुन्दा निक्कै नमज्जा लाग्छ । समयले उसलाई गायक बनायो । अरुको भन्दा केहि फरक गरेको पनि हो । यसलाई नकार्न सकिदैन । गीतको न्युनतम गुण कर्णप्रियता दुर्गेशको गीतमा छैन । तर उनी समय अनुसार एक निश्चित समूहको मन जितेर अगाडी भने पक्कै बढेका छन् ।
हालसालै को कुरा गरौ, फिल्म छ माया छपक्कैको प्रमोसनल गीत बिचबिचमा उनकै गीतमा आधारित भएर बन्यो उनको तीज गीतको चर्चाका कारण । त्यो गीतमा पनि बिहे नगरेकी दीपा ब्याउने कुरा छ भन्ने कुराले विवाद ल्यायो । तर बोल्न जान्ने दिपकले कुरो सल्टाए । यति मात्रै कहाँ हो र ठुला ठुला नेतालाई फिल्म हाल सम्म तान्न समेत सफल भए । भनेपछी कुरा, चर्चा संगसंगै पहुचको पनि रहेछ । सामान्य व्यक्ति पनि के भनौ दुर्गेश आफैले पनि ‘ब्याउने’ शब्द प्रयोग गरेको भए र दीपक दीपाको फिल्मको गीत नभएको भए त्यहि समय अश्लिल शब्द प्रयोग गरेको भन्दै जेल नै जानु पो पर्ने हुने रहेछ ।
गीत युट्युबबाट हट्यो । यो कुरा सामान्य हो । आरोप लागेपछी गीत हटाउनु दुर्गेशको नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन आउछ । गीत आयो, गीत संगै बिबाद आयो र गीत प्लेटफर्म बाट हटाईयो । हिजो पशुपती शर्माको पनि गीत हटाईएको थियो ।
आरोप फरक होलान तर ब्यापारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो यौटा कलाकारलाई परेको आर्थिक क्षती समेत हो । राज्यले कुनै जिम्मेवारी नलिएका कलाकारले हातमुख जोर्नको लागि युट्युबमा थापेको पसललाई अनुगमनको नाममा शिल गरेजस्तै अबस्था भनिनु पर्छ ।
युट्युबबाट गीत हट्दैमा समाजले त्यो गीत बिर्षन्छ भन्ने हुदैन । हजारौँ जनाले टिकटक बनाएका छन । फेसबुकमा टुक्रा टुक्रा पारेर अपलोड गरेकाछन ति टुक्राहरु अब त्यहीँ त्यसरीनै रहिरहनेछन र मन पराउनेले प्रयोग पनि गरिरहनेछन । यो हट्नु लाई या यसरी युट्युबबाट डिलीट गर्नुलाई गीतमाथीको एउटा प्लेटफर्म माथी मात्र लगाईएको बन्देज भनेर बुज्दा फरक नपर्ला ।
अर्कोकुरा बिरोध किन पनि चर्को भयो भने थापा लोक गीतलाई आधार बनाएर क्यारियर उकास्दै गरेका कलाकार हुन । उनी लोक गायक या लोक गीतका मोडल भनेर चिनिएका छन । नेपाली संगीत पारखीहरु अरु जे पनि सहन सक्छन तर लोकगीत विगारेको सहन सक्दारहेनछन भन्नेकुरा केही बिरोधका घटनाक्रमले पुष्टी गरेका छन ।
ज्योती मगरलाई लोक गायिका भएर छोटो जामा लगाउने भनेर चर्कै गाली गरियो सामाजीक सञ्जालमा । प्रकाश सपुतलाई ब्याटल गीत गाएको आरोपमा तथानाम भनियो । अहिले दुर्गेश त्यही तरिकाको कोपभाजन को शिकार भएका मात्र हुन । यही गीत भिटेन या लाहुरे हरुले निकालेको भए ‘रक गीत’ मा दर्ता हुन्थ्यो । यसरी कलाकारको पृष्ठभुमीले पनि आलोचना र विरोधको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
केही शब्दहरु नकारात्मक छन मात्र भनेर पन्छीनु पनि गाह्रै छ । गीतले संगीतले समाजलाई सकारात्मक संदेश दिनु पर्दछ र सही मार्गनिर्देश गर्नुपर्दछ । कुनैपनि कलाकारको सृजनाबाट समाजले केही न केही सही कुरा प्राप्त गर्नु पर्दछ । दुर्गेशको गीतले दिएको सन्देश समाजको लागि फाईदाजनक थिएन भनेर आरोप लगाउनु ठिकै होला तर के दुर्गेश एक्लै त्यो लाईनमा छन त ?
पहिलो पटक पशुपति शर्माको गीत हटाएको प्रसासनले दोश्रो पटक बहादुरीको काम गरेको अनुभव गरेको होला । तर यसको पछाडी अन्य बियर कम्पनिको हात पो छ कि ? जनता भेडा छैनन् ।
२०७६ कार्तिक ५ गते १९:२८ मा प्रकाशित